के हो इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ? कसरी गर्ने? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
के हो इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ? कसरी गर्ने? युट्युबका भिडियो हेरेर आफूखुसी गरिएका इन्टरमिटेन्ट फास्टिङले हानी गर्न सक्छ
कमला गुरुङ शनिबार, फागुन १५, २०७७, ०९:२९:००
काठमाडौं- शरीरको तौल घटाउन अहिले खानपान तथा जीवनशैलीका विभिन्न तरिका अपनाउने प्रचलन बढिरहेको छ। 'इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ' पछिल्लो समय निकै चर्चा हुने गरेको खानपान शैली हो।
इन्टरमिटेन्ट फास्टिङका विभिन्न विधिअन्तर्गत १६/८ घण्टाको इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ बढी प्रचलित विधि हो। यो विधिमा ८ घण्टा मात्र खानेकुरा खाने गरिन्छ भने बाँकी १६ घण्टा उपवास बस्नुपर्छ।
इन्टरमिटेन्ट फास्टिङले शरीरको तौल नियन्त्रणमा ल्याउन मद्दत गर्ने मात्र नभएर सम्पूर्ण स्वास्थ्यमा नै फाइदा गर्दछ। व्रत अर्थात् उपवास बस्ने चलन पौराणिक परम्परादेखि चल्दै आएको हो। व्रत बस्दा स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्ने विज्ञानले पनि पुष्टि गरिसकेको छ।
इन्टरमिटेन्ट फास्टिङले रक्तचाप नियन्त्रण गर्नुका साथै शरीरमा सुगरको मात्रा पनि ठिक राख्न मद्दत गर्दछ। अधिकांशले इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ आफूखुसी पनि गर्ने गर्छन्। आफूखुसी गरिएको इन्टरमिटेन्ट फास्टिङले शरीरलाई राम्रो गर्नुको सट्टा बिगार पनि गर्न सक्छ। त्यसैले इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ सुरु गर्दा विशेषज्ञको निगरानी र सल्लाहमै सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ।
इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ भनेको के हो? यसले शरीरलाई गर्ने फाइदाहरु के के हुन्? लगायत विषयमा हामीले नर्भिक अस्पतालका पोषणविज्ञ प्रणिती सिंहसँग कुराकानी गरेका छौँ। उनीसँग गरिएको भिडियो कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ भनेको के हो?
–इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ भनेको डायट नभई जीवनशैली हो।
–इन्टरमिटेन्ट फास्टिङमा केही अवधि खान्छौँ र केही अवधि खाँदैनौँ अर्थात् फास्टिङ गर्छौँ।
–इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ कुनै एक विशेष नभई धेरै प्रकारको हुन्छ।
–अहिले प्रचलनमा रहेको १६/८ घण्टा इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ हो।
– १६/८ घण्टे इन्टरमिटेन्ट फास्टिङमा ८ घण्टा मात्र खाने कुरा खान्छौँ भने १६ घण्टा उपवास बस्छौँ।
– ८ घण्टामा शरीरलाई आवश्यक खाने कुरा मात्र खानुपर्छ।
– दोस्रो विधि ५:२ इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ हो। यसमा हप्ताको ५ दिन खाना खान्छौँ भने २ दिन भने निकै थोरै खाना मात्र खान्छौँ।
–तेस्रो विधि 'इट स्टप इट' हो। हप्ताको ५ दिन खाना खान्छौँ भने कुनै पनि २ दिन जिरो क्यालोरी भएको खाना मिल्छ।
–सबैलाई एउटै खालको विधि लागू गर्न मिल्दैन। उनीहरूको जीवनशैली, काम अनुसार इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ गर्नुपर्छ।
इन्टरमिटेन्ट फास्टिङले शरीरलाई के के फाइदा गर्छ?
– इन्टरमिटेन्ट फास्टिङको पहिलो फाइदा भनेको शरीरको तौल घटाउन मद्दत गर्छ।
– इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ गर्ने बित्तिकै तत्काल नतिजा देखिँदैन। २ देखि ४ हप्तापछि यसको नतिजा देखिन थाल्छ।
– शरीर तौल घट्नुका साथै फ्याटी लिभर, मधुमेह जस्ता समस्याको जोखिम कम गर्छ।
–मधुमेह र मिर्गौलाका बिरामीले इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ गर्न मिल्दैन।
–मधुमेह र मिर्गौलाका बिरामीले विशेषज्ञको निगरानीमा गर्दा फाइदा पनि हुन्छ।
इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ कसले गर्न मिल्छ र कसले गर्न मिल्दैन?
– १८ वर्ष र १८ वर्षभन्दा मुनिका व्यक्तिले इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ गर्न मिल्दैन।
– आवश्यकभन्दा कम तौल भएका व्यक्ति, गर्भवती, स्तनपान गराइरहेकाले पनि इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ गर्न मिल्दैन
– शरीरमा चिनीको मात्रा नियन्त्रणमा नहुने व्यक्तिले आफूखुसी पनि गर्न मिल्दैन।
कतिपयले युट्युबका भिडियो हेरेर पनि आफूखुसी इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ गरिरहेका हुन्छन्। यो कतिको ठिक हो? यसले निम्त्याउने समस्या के के हुन सक्छन्?
- युट्युबका भिडियो हेरेर आफूखुसी इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ गर्नु स्वास्थ्यका निम्ति ठिक होइन।
–विशेषज्ञको सल्लाह बिना आफूखुसी इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ गर्दा स्वास्थ्यमा समस्या पनि आउन सक्छ।
– सबैलाई १६ घण्टाको उपवास अनिवार्य हुँदैन। शरीरको आवश्यकताअनुसार हुने भएकाले विशेषज्ञको सल्लाहमा गर्नुपर्छ।
यदि कुनै व्यक्तिले इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ गर्न चाहन्छ भने उसले के के कुरामा ध्यान दिन दिनुपर्छ?
– इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ किन गरिरहेका छौँ भन्ने आफ्नो उद्देश्यप्रति स्पष्ट हुनुपर्छ।
– तपाईंको जीवनशैलीसँग यो मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ।
– यो जीवनशैली भएकाले यसलाई सीमित समयको लागि नभई जीवनभर लागू हुने गरी गर्नुपर्छ।
–आफूखुसी भन्दा पनि विशेषज्ञको निगरानीमा इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ।
–युट्युब हेरेकै आधारमा इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ गर्दा स्वास्थ्यमा फाइदा दिनुको सट्टा नकारात्मक असर पनि पर्न सक्छ।
शनिबार काठमाडौंमा ४६ हजारले लगाए भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा १० मिनेट पहिले